Arsenal 1-1 Tottenham: RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii Derbiga Waqooyiga London ee barbaraha ku idlaaday – Gool FM
Arsenal 1-1 Tottenham: RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii Derbiga Waqooyiga London ee barbaraha ku idlaaday
(London) 06 Nof 2016 – Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa iska lumisay fursad ay hoggaanka ugu qaban kartay horyaalka Premier League, kaddib markii kulankii Derbiga Waqooyiga London ee ay soo dhowaysay Tottenham uu ku dhammaaday barbaro 1-1.
Gool uu iska dhaliyey (Own goal) xiddiga Spurs ee Kevin Wimmer qeybta hore ee ciyaarta iyo gool ku laad (rigoore) uu dhaliyey Harry Kane ayaa kulankan lagu kala tagay.
>- Wimmer ayaa noqday ciyaaryahankii labaad ee gool (own goal) kaga dhaliya kooxdiisa Premier League kulanka darbiga Waqooyiga London (North London derby) xiddigii kalena waa Chris Armstrong oo iska dhaliyey bishii March 2000.
>- Arsenal ayaa gool ka dhalisay 35 ka mid ah 36-kii kulan ee ugu dambeeyey kulamada darbiga Waqooyiga London (North London derby) ee Premier League, marka laga reebo kalinkii barbaraha goolal la’aanta 0-0 ku dhammaaday ee ka dhacay garoonka White Hart Lane 8 bishii Febraayo sanadkii 2009.
>- Kane ayaa hadda ka dhaliyey 5 gool 4 kulan oo uu Premier League ku wajahay kooxda Arsenal.
>- Kulanka dhexmara Arsenal iyoTottenham hadda waa kulanka ugu goolasha badan taariikhda horyaalka Premier League, waxaana la isaga dhaliyey 139 gool.
>- Kane ayaa hadda barbareeyey ciyaaryahankii Tottenham ugu goolasha badnaa kulamada darbiga Waqooyiga London (North London derby) ee Premier League, kaasoo ahaa Gareth Bale oo 5 gool ka dhaliyey kulankan.
>- Arsenal ayaa guul la’aan ah shantii kulan ee ugu dambeeyey oo ay Premier League ciyaartay kulamada darbiga waqooyiga London, waxa ay barbaro gashay afar kulan, iyadoo laga adkaaday hal kulan.
Goolka Zlatan Ibrahimovic oo baal dahabi ah ka galay taariikhda Premier League